Ogaden News Agency (ONA) – Dibad bax looga soo hor jeedo dhaqaalaha lasiiyo Ethiopia oo ka socda Brussels
Dibad bax looga soo hor jeedo dhaqaalaha lasiiyo Ethiopia oo ka socda Brussels
Posted by ONA Admin	/ June 21, 2012
Waxaa maanta oo ay taariikhdu tahay 21/6-2012-ka dibad bax balaadhan isugu soo baxay shacabka S/Ogadenia ee ku nool qaarada Europé. Dibad baxa ayaa wuxuu ka socdaa xarunta Midowga Yurub ee dalka Belguim-ka ayay shacabka S/Ogadenia ku codsanayeen sidii looga joojin lahaa deeqaha la siiyo xukuumada kaligii taliye Melez Zanawi oo u adeegsada xasuuqa shacabka dulman ee S/Ogadenia.
Shacabka geesiga ah ee reer Ogadenia oo cadhaysan ayaa dareenkooda ku muujiyay sida ay uga xun yihiin dhibaatada & dacadiga lagu hayo shacabka walaalahooda ah ee ku dhaqan gudaha Ogadenia, sikastaba ha ahaatee ficilada & erayada ay ku dhawaaqayeen mudaharaadayaasha ayaa soo jiidanayay indhaha bulshada reer Belguim.
Qaabka mudaharaadayaasha ayaa ahaa mid wax badan ka badalnaa siyaalahii hore ee ay u dibad bixi jireen, waxaa ka muuqday qiira badan ayagoo matalayay ama muujinayay sida dhabta ah ee loo xasuuqo shacabka S/Ogadenia.
Dibad baxa oo bilaawday saaka 9:30 am aroornimo ayaa wali socda oo aysan fari ka qodnayn iyadoo ay saacadu sii cagacagaynayso 01:00pm duhurnimo, waxii dib kasoo kordha & sida uu dibadbaxu kusoo gabagaboobo dib ayaanu idinkala soo socodsiin doonaa insh-allaah.
Ilwaad Ali/ONA – Brussels.